लामो समय यौ’न स’म्पर्क राख्न के गर्ने ?
Homeस्वास्थ्यलामो समय यौ’न स’म्पर्क राख्न के गर्ने ?
May 21, 2020 kandai kanda 1 स्वास्थ्य
यौ’न उ’त्तेज’नामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको अध्ययनमा यो’निमा लि’ङ्ग प्र’वेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषले चर’मसुख पाएको देखिएको थियो ।
यौ’नस’म्पर्कको समय व्यक्ति, जोडी अनि परिस्थितिअनुरूप फरक–फरक हुन्छ । Journal of Sex’ual Medicine मा गरिएको एक अध्ययनमा से*क्स थेरापिष्टले ले १–२ मिनेटको यौ’नसम्प’र्कको समयलाई ‘धैरै छोटो’, ३–७ मिनेटको समयलाई ‘पर्याप्त’ अनि ७–१३ मिनेटको समयलाई ‘वाञ्छनीय’ मानिएको छ ।
नेपालमा नेपालीले यौ’नस’म्पर्क राख्ने समय कति हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन, त्यसैले बाहिरका अध्ययनलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ तर महत्वपूर्ण कुरा यौ’नस’म्पर्क भनेपछि यो’निमा लि’ङ्ग प’साएपछि मात्र सुरु हुने कुरामा सीमित हुने सोचभन्दा वाहिर आउनुपर्छ । तपाईं वा तपाईंकी श्रीमतीलाई राम्रोसँग यौ’न उ’त्तेजनामा आउन लाग्ने समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा यौ’नस’म्पर्कमा सं’लग्न दुवै जना यस्ता यौ’नसम्प’र्कको समयावधिलाई लिएर स’न्तुष्ट हुनुपर्छ ।
सर्वप्रथम त त’नावरहित हुन आवश्यक छ । त’नाव, चि’न्ता अनि विशेष गरेर यौ’न सक्षमताको चि’न्ताले यसमा कुनै सहयोग गर्दैन । यौ’न सा’थीलाई आफ्नो यौ’न क्षम’ता प्रदर्शित गर्नुपर्ने द’बाब भए सम’स्या थप चर्को हुन सक्छ । यस्तो स्थितिलाई उभायचmबलअभ बलहष्भतथ भनिन्छ । यौ’नस’म्पर्कको समय छोटो हुने स’मस्यालाई कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
यौ’नस’म्पर्क रोक्ने–सुरु गर्ने : यौ’नस’म्पर्कका क्रममा स्ख’लन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै यो’निबाट लि’ङ्ग झिके’र केही बेर यौ’न क्री’डा रोक्ने र उत्ते’जना केही कम भएपछि पुन: सुरु गर्ने ।
आ’सन परिवर्तन गर्ने : लो’ग्नेमान्छे माथि र महिला तलको सट्टा महिला माथि बसेर सक्रिय भै यौ’नस’म्पर्क गर्दा पनि स्ख’लन रोक्न मद्दत मिल्छ ।
लि’ङ्ग अँठ्या’उने : यौ’नस’म्पर्कका क्रममा स्खल’न होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिं’ग यो’निबाट बाहिर झि’केर लि’ङ्गको फेदलाई बे’स्सरी अँठ्या’उने र वी’र्य स्ख’लन हुन नदिने । उ’त्तेजना केही कम भएपछि पुन: यौ’नक्री’डा सुरु गर्ने ।
क’न्डमको प्र’योग : क’न्डमको प्रयोगवाट पनि कतिपयलाई शी’घ्र स्ख’लनको स’मस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेला चि’प्लो प’दार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको क’न्डमले बढी फाइदा पुर्‍याउँछ ।
मांसपेशीको प्रयोग : पि’साब आउँदा रो’क्न प्रयोग हुने मांसपेशीको क’सरत गरेर वी’र्य स्ख’लनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके फाइदा मिल्छ ।
श्रीमतीमा यौ’नेच्छा बढी भएको पनि हुन सक्छ । यो कुरा तपाईंहरूबीचको सम्बन्धको सुमधुरता मात्र होइन, शा’रिरीक तथा मा’नसिक स्थितिमा पनि भर पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यौ’नसम्प’र्कवाट मात्र महिलाले यौ’न स’न्तुष्टि प्राप्त गर्नेे होइन । महिलाले कसरी यौ’न सु’ख प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने मात्र होइन, त्यसमा संलग्न पनि हुनुपर्छ ।
महिलाको सबैभन्दा यौ’न संवे’दनशील अ’ङ्ग ‘भगा’ङ्कुर’ बाहिरतिरै हुन्छ । त्यसलाई हात वा औंलाले चला’एर यौ’न च’रमसु’ख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ । यो’नि अर्को महत्वपूर्ण अ’ङ्ग हो । यसको बाहिरतिरको भाग यौ’न संवे’दनशील हुन्छ । यो’निमा केही पसा’ई त्यसबाट घ’र्षण गराएर आ’नन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्त’न तथा अन्य यौ’न संवेदन’शील अ’ङ्गको मर्दन, घर्षण अनि चलाउने जस्ता क्रि’यालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यौ’न क्रि’याकलापमा संलग्न हुँदा पा’क्क्री’डामा संलग्न भए यौ’न उत्ते’जना प्राप्त गर्न र चर’मसु’खसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले यौ’नसम्प’र्कमा संलग्न दुवै जनालाई साथसाथै चर’मसु’ख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । दुवैले एकसाथ च’रमसु’ख प्राप्त गर्नु सजिलो कुरा होइन र यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । साथसाथै च’रम सु’ख प्राप्त भएन भनेर पीर गर्नुपर्ने आवश्यता छैन, पालैपालो ‘यौ’न चर’मसुख प्रा’प्त गरे पनि हुन्छ । एजेन्सी
कोरोनाको सं क्रमण बढेपछि काठमाडौं उपत्यका सिल गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय
‘नेपाल कश्मिर होइन, नेपालकाे नयाँ नक्साकाे वि,रोध गर्नुकाे अर्थ छैन’ : भारतीय प्रोफेसर स्वैन
buy tadalafil online overnight shipping – tadalafil canadian pharmacy generic tadalafil 20mg
how to get propecia – http://finasteridepls.com/ does propecia regrow hair
Notvuc – http://virviaga.com/ buy viagra in canada
Hufcyw – annotated bibliography example apa 6th edition Tfgbez xyhuvr
ed treatments ed in young men
Dbhrzr – cialis pas cher livraison rapide Rygatl zjmvhf
Objlyu – furosemide 100 mg Mhusqr tlufia
[url=http://zaraloans.com/]best places to getapersonal loan[/url]
buy discount vardenafil – vardenafil buy online vardenafil
considerably in the case of this topic, made me in my opinion believe it from
a lot of varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it’s something to do with Lady gaga!